गृहपृष्ठ » प्रविधि » मासिक २५ हजार मात्र तिर्न सक्नुहुन्छ भने चढ्नुहोस् निसान म्याग्नाइट लग्जरी कार
काठमाडौं । म्याग्नाइट सब फोर मिटर एसयूभी निसानको लागि नेपालमा गेमचेन्जर बनेको छ ।
पायोनियर मोटोकर्पले विक्री गर्दै आएको म्याग्नाइट अहिले धेरै विक्री हुने सब फोर मिटर एसयूभी बनिसकेको छ । यो साधारण कमाई भएका मानिसले समेत चढ्न सक्ने लग्जरी कारको रुपमा बजारमा आएको छ ।
डिजाइन, फिचर र मूल्यको कारण धेरै ग्राहकको रोजाईमा पर्न सफल म्याग्नाइट कै कारण निसान र डाट्सन ब्राण्डको विक्रेतालाई ठूलो राहत भएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।
निसानले पनि भारतमा उत्पादन गरेको म्याग्नाइटलाई चुनौतीको रुपमा लिएको थियो । कम्तीमा मासिक ४ हजार यूनिट म्याग्नाइट विक्री हुनसके मात्र भारतीय बजारमा निसान रहने विभिन्न रिपोर्टहरुले उल्लेख गरेको समयमा सबैभन्दा कम मूल्यमा म्याग्नाइटको विक्री सुरु गरेको थियो ।
कम्पनीको रणनीति सहि सावित भयो । अहिलेपनि भारतमा धेरै वेटिङ पिरियड भएको सब फोर मिटरमा म्याग्नाइट रहेको छ । नेपालमा पनि सुरुमा आउँदा सबैभन्दा कम मूल्यको सब फोर मिटर एसयूभी यही थियो । तर, अहिले रेनो काइगर सबैभन्दा कम मूल्यको सब फोर मिटर एसयूभी भएको छ ।
कम मासिक किस्तामा नै एसयूभी खोज्ने ग्राहकको चाहना पुरा हुने भएकोल नै यसको विक्री बढीरहेको हो भन्दा फरक पर्दैन ।
मूल्य र मासिक किस्ता
विभिन्न ११ भेरियन्टमा उपलब्ध म्याग्नाइट एक्सई भेरियन्टको मूल्य ३० लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ भने एक्सएल मिड भेरियन्टको मूल्य ३३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै एक्सभी अपर भेरियन्टको मूल्य ३६ लाख ९९ हजार, एक्सभी अपर ड्यूल टोन भेरियन्टको ३७ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
म्याग्नाइटको एक्सभी प्रिमियम मोनो र एक्सभी प्रिमियम ड्यूल टोनको मूल्य क्रमशः ४० लाख ४९ हजार र ४० लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । माथि उल्लेख भएका सबै भेरियन्ट १.० लिटर नेचुरल्ली एस्पिरेडेड इन्जिन भएका हुन् ।
टर्बो इन्जिन भएको एक्सएलको मूल्य ३८ लाख ९९ हजार, एक्सभी अपर मोनोको मूल्य ४१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी एक्सभी प्रिमियमको मूल्य ४४ लाख ९९ हजार र एक्सभी प्रिमियम ड्यूल टोन भेरियन्टको मूल्य ४५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
बैंक तथा वितिय संस्थाले व्याजदर बढाएकाले ग्राहकले केही बढी व्याज तिर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । अहिले अधिकांश बैंकले ९ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । यस्तोमा म्याग्नाइटको वेस भेरियन्ट किन्ने ग्राहकले मासिक २५ हजार हाराहारी मासिक किस्ता तिर्नु पर्छ भने टप भेरियन्ट एक्सभी प्रिमियम ड्यूल किन्ने ग्राहकले ३६ हजार हाराहारी तिर्नु पर्छ ।
भिभो भी२३ई नेपालमा आउने सुनिश्चित, ५० मेगापिक्सेल एएफ पोर्ट्रेट सेल्फी र आकर्षक डिजाइन रहने
नेपालमा नै बने अति आकर्षक र क्षमतावान इलेक्ट्रिक बाइक, जो कोहीले किन्न सक्ने मुल्यमा सार्वजनिक
जान्नुहोस् विश्वकै सबैभन्दा बढी पटक हेरिएको युट्युब भिडियो कुन हो, जसले कति पाएको छ भ्युज ?
मादक पदार्थ पिएर सवारी चलाउन नै रोक्ने प्रविधि आउँदैछ, कस्तो हुन्छ यो प्रविधि ?
टिकटकले के गर्यो यस्तो : माण्डपमा बिहेको कार्जे नसकिँदै बेहुली डान्समा उत्रिएपछि सबै चकित
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई इजरायल सरकारको सहयोग
इन्टरनेटमा महंगो तिर्नुपर्ने दिन सकिए, सीजी नेट अब यति हदसम्म सस्तो र तीब्र गति
नेटलिक्स ? तपाईँ अब टीभीको स्क्रीन चाटेर ‘खानेकुराको स्वाद चाख्न सक्नुहुन्छ’ !
गुगललाई उछिन्दै टिकटक बन्‍यो दुनियाँकै सबैभन्दा लोकप्रिय वेबसाइट [ उत्कृट १० को सूचीसहित ]
नेपाल टेलिकमले सबै स्थानीय कार्यालयमा सेवा पुर्याउने
वैज्ञानिकहरूले मंगल ग्रहको सतहमुनि पत्ता लगाए ठूलो जलाशय, के त्यहाँपनि मानिस छन् ?
तपाईलाईपनि अवश्य जान्न इच्छा होला गुगल सबैभन्दा धेरै खोजिएको के हो ? [ यहाँ छ जानकारी ]
अफर : ४० हजार रुपैयाँ छुटमा किन्नुहोस् iPhone 12 Pro मोबाइल
गर्भवती आमाको राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमको हेलिकप्टरबाट उद्दार, आमा-बच्चा दुवै सुरक्षित
भारतिय देखि नेपालीसम्मका लोकप्रिय गीतमा टिकटक बनाउने भाइरल अफ्रिकन को हुन् ?